Izindawo zokucima ukoma e-West Rand zizovalwa ebusuku ukuvimba amaqembu ezigelekeqe | Scrolla Izindaba
Izindawo zokucima ukoma e-West Rand zizovalwa ebusuku ukuvimba amaqembu ezigelekeqe
Abanikazi bezindawo zokucima ukoma bahlanganyele empini yokulwa nobugebengu nokubulawa kwabantu okuhlobene nezigelekeqe za-Besotho e-West Rand kasis.
Yize kunezinhlelo eziningi zokungenelela ezinjengokugada nokubandakanya amaphoyisa, ubugebengu buye baba bubi kakhulu kanti izakhamizi seziphendukele kubanikazi bezindawo zokucima ukoma futhi sebebeke nomthetho wokufika ekhaya ngokushesha.
Amathaveni ngeke esasebenza ngemuva kwehora lesishiyagalolunye ebusuku emalokishini ase-Tambo, e-Mandela, e-Spooktown nase-Silver City.
“Impumelelo le,” kusho umholi womphakathi uGaddafi Ncela.
“Abanikazi bamathaveni bakulungele ukuvala ngehora lesishiyagalolunye ebusuku ngemuva kokuba sikhulume nabo ngengozi yokuvala phakathi kwamabili.”
Isinyathelo somphakathi sokucela abanikazi bamathaveni siza ngemuva kokuthi uNgqongqoshe wezamaPhoyisa uMnu Bheki Cele ethule isigava sokuqala sokungena ekhaya phakathi kwamabili nehora lesine ekuseni.
UGaddafi uthe: “Sakha isu lokukhuculula indawo yethu kulenhlekelele yobugebengu ukukhombisa ukuthi izwe lethu lingasindiswa uma sisebenza ngokubambisana.”
Umnikazi wethavern uVusi Masondo uthe: “Inzuzo ayinakubaluleka ngaphezu kwempilo. Sizobekezela sisebenzisane namaphoyisa kanye nomphakathi. Sizolahlekelwa ngabantu abaphuza utshwala nemali kodwa asinakho ukukhetha ”
Okhulumela amaphoyisa ase-Bekkersdal uSayitsheni uLinki Lefakane ukuqinisekisile ukuthi isithangami samaphoyisa somkhakha sokulwa nobugebengu besibambe iqhaza emkhankasweni wokuqwashisa umphakathi kodwa akazange ayiphendule imibuzo enengezeliwe ngenkathi esesithamelini sezindaba.
Abakwa-Scrolla.Africa bashicilele izindaba ngezakhamizi ebezikhungathekile ezikhononda ngokusatshiswa nga-Besotho abagqoke izingubo.
Ngesonto eledlule, uMmathabo Thokoa, ugobela wa-Besotho nabanye a-Besotho bajoyine umhlangano womphakathi bezokhombisa ukubamsulwa kwabo. “Akubona bonke abantu abagqoka izingubo ababi,” kusho uGobela.